विवाहको प्रसंगमा आलियाले भनिन् – तपाइँ कोसँग डेट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन
‘जतिबेलासम्म तपाइँ मेरो बाथरुममा पस्नु हुन्न त्यति बेलासम्म ठिक छ। यदि कसैले मेरा बारेमा कुरा गरिरहेका छैनन भने म लोकप्रिय छैन भनेर बुझ्नु पर्र्यो
बुद्धबार, ३० श्रावन २०७५, सगरमाथा पोष्ट
एजेन्सी, ३० साउन
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टले आफू कुनै पनि अफवाहप्रति ध्यान नदिने बताएकी छन्। आलियाको निजी जीववन रणबीर कपुरसँगको सम्बन्धलाई लिएर निकै चर्चामा छ। यो विषयमा सोमबार आलियाले पत्रकारसँग कुरा गरिन्।
पत्रकारले आलियालाई रणबीरसँग विवाह गर्दै हुनुहुन्छ? भनेर सोधका थिए। जवाफमा आलियाले भनिन्, ‘जतिबेलासम्म तपाइँ मेरो बाथरुममा पस्नु हुन्न त्यति बेलासम्म ठिक छ। यदि कसैले मेरा बारेमा कुरा गरिरहेका छैनन भने म लोकप्रिय छैन भनेर बुझ्नु पर्र्यो। यदि मानिसहरुले मेरो कुरा गरिरहेका छन् भने म लोकप्रिय रैछु भनेर सोच्नुपर्यो। म पेशेवर र निजीस्तरमा एकदम खुशी छु।’
पत्रकारले अलियालाई अर्को पश्न सोधे–तपाइँ अरु कसैसँग डेट गरिरहनु भएको छ? जवाफमा आलियाले भनिन्, ‘जहिलेसम्म तपाइँ एक कलाकार हुनुहुन्छ, तपाइँको काम अभिनय गर्ने हो। जब तपाइँ क्यामरा अगाडि हुनुहुन्छ भने तपाइँ कोसँग डेट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन।’ अलिया अभिनेता रणबीर कपुरसँग फिल्म ‘ब्रम्हास्त्र’ मा काम गरिरहेकी छन्।